🥇 ▷ iPad Pro 2019: Qaab-dhismeedka Naqshadeynta AppleTablets ayaa kor loo qaaday ✅
iPad Pro 2019: Qaab-dhismeedka Naqshadeynta AppleTablets ayaa kor loo qaaday
Kadib Apple hadda oo jiilka cusub ee iPhone uu ku dhawaaqay, sida ay sheegayaan wararka xanta ah ee Oktoobar waxaan heysanaa dhacdo kale oo soo socota. Halkaa, waxay shirkaddu sidoo kale soo bandhigi kartaa barnaamijka loo yaqaan ‘iPad Pro’ oo dib loo habeeyay, kaas oo ka jaraya qayb ka mid ah iPhone 11 Pro ee dhowaan la soo bandhigay.
Aaladda iPad Pro: Moodada dummy-ga ayaa ka muuqda kamarad saddex-geesood ah
Toddobaadyo yar ka hor, bishii Ogosto ee la soo dhaafay, waxaa jiray warar sheegaya in Apple mustaqbalka iPad Pro uu iibsan doono nidaam kaamiro leh oo leh seddex kaamirooyin – oo dhowaan la soo bandhigay iPhone 11 Pro wuxuu salaamayaa. Haddii warbixintan lagu sawiray naqshad Photoshop ah oo muujisay waxa iPad Pro 2019 u eg yahay, waxay lasocotaa sawir ah loo malaynayo “jees jeeskii ugu dambeeyay” oo uu sii daayay Leaker Sonny Dickson (oo loo maro 9to5Mac, MacRumors).
Caruusada la sawiray waxay sidoo kale ku tusaysaa kamarad saddex-geesood ah, inkasta oo ay jirto hanuuninta waxyar ka duwan ee kamaradaha shakhsiga ah. Laakiin tani waxay si fudud u noqon kartaa sababtoo ah waa qaylo-dhaan, oo ay ugu horreyn muujineyso cabbirka iyo faahfaahinta dibedda. Marka la barbar dhigo iPhone 11 Pro ayaa ka maqan iPad Pro sida lagu sheegay warbixinta, laakiin sidoo kale daboolka muraayadda ee kamaradaha, maadaama laga heli karo iPhoneka cusub.
Jiritaanka kaamirooyin dib loo habeeyay oo ku jira iPad Pro ayaa laga yaabaa inay muujiso in Apple sidoo kale doonayo inuu ku kharash gareeyo kiniinka xirfadlaha ah sida astaamaha sida iPhone 11 Pro. Midkani wuxuu lahaa Apple Iyadoo qayb ka ah dhacdaddeedii iPhone horaantii Sebtember, tusaale ahaan, oo lagu soo bandhigay bandhiga cajiibka ah ee Filmic Pro. Astaamo la mid ah, waxaad ku soo jiidan kartaa filim sameeyeyaasha xirfadleyda ah mustaqbalka ‘Pro Pro’.
IPad Pro wuxuu heli doonaa nidaam hawlgal cusub asbuucyo gudahood oo leh iPadOS 13. Waa kuwan isbeddelada ugu waaweyn:
Dhacdada Pro ee Oktoobar: iPad Pro, MacBook Pro iyo Mac Pro
Sida ay sheegayaan wararka xanta ah ee dhawaanahan, oo ku soo beegmi doona iyadoo la eegayo taariikhda dhacdada Apple, iPhone sameeyaha ayaa qorsheynaya dhacdo kale bisha Oktoobar ee soo socota. Ajandaha ayaa markaa ah badeecadaha Pro ee kala duwan, marka lagu daro iPad Pro, MacBook Pro iyo Mac Pro.
Waxa intaa u dheer MacBook Pro cusub oo leh 16-inji oo leh muuqaal gebi ahaanba dib loo eegay, sidoo kale waxa ka maqan faahfaahinta qaar ee ku saabsan Mac Pro. Illaa iyo hadda, tusaale ahaan, kaliya qiimaha billowga ee qiyaastii 6,000 oo doolarka Mareykanka ah ayaa la ogyahay, sicirka soo haray weli ma cadda. Iibinta qalabka sare ee ‘Mac’ ayaa la filayaa inuu bilowdo dabayaaqada sanadkan. Dhacdada Oktoobar ayaa Apple ka dhihi karay ereyo dhowr ah oo ku saabsan macOS Catalina iyo inay na siiso taariikh cayiman oo la heli karo.